“ဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေး၊ အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်မှ ပြည်သူတွေအပေါ်ပြုမူနေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ပြော” – အနုပညာရပျဝနျး
“ဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေး၊ အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်မှ ပြည်သူတွေအပေါ်ပြုမူနေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ပြော”
အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကို လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကို ကျည်အစစ်တွေနဲ့ ပ စ်သတ်နေတာတွေ ချက်ချင်းရပ်ဖို့ စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဘီဘီစီနဲ့သီးသန့်ပြုလုပ်တဲ့ ဒီကနေ့အင်တာဗျူးမှာ စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ် လီရှန်လွန်းက အာဏာသိမ်းတာဟာ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလိုက်ပြီး “(စစ်တပ်အနေနဲ့) နောက်ပြန်ဆုတ်ရမယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပြီး စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရမယ်။ မြန်မာပြည်အတွက် ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ်”လို့ ဆိုပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဒီမိုကရေစီရေးတောင်းဆိုနေတဲ့ လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကို ကျည်အစစ်တွေနဲ့ပစ.်သတ.်နေတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ အလွန်အန္တရာယ်များလွန်းတဲ့၊ လက်မခံနိုင်စရာလုပ်ရပ်လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။“လက်နက်မဲ့ အရပ်သားဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကို ကျည်အစစ်သုံးပြီးပစ.်သတ.်တာ တော်တော်ကို လက်မခံနိုင်စရာပဲ။ ဒါဟာ ပြည်တွင်းမှာတင်မက နိုင်ငံတကာကိုပါ အန္တရာယ်ကြီးဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိနေတာပဲ။
ခင်ဗျားအင်တာနက်ကို ပိတ်ချလိုက်ပေမယ့် သတင်းတွေကရနေတာပဲ။ မြန်မာပြည်သူတွေကလည်း သူတို့ဘက်မှာ ဘယ်သူတွေရှိတယ်ဆိုတာ သိတာပဲလေ။ ဒီအစိုးရဟာ သူတို့ဘက်မှာမရှိဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင် အဲဒီအစိုးရက တကယ့်ကိုပြဿနာကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ ကျနော်ထင်တယ်”လို့ ဝန်ကြီးချုပ် လီရှန်လွန်းက ဆိုပါတယ်။မြန်မာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင် လက်တွေ့ကျတဲ့သဘောထားရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်လုပ်ခဲ့တာကို သဘောမတူတဲ့အကြောင်း ထုတ်ပြောမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကျနော်တို့မှာ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင် လက်တွေ့ကျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသောနိုင်ငံတွေအများကြီးမှာ တန်ဖိုးထားကြတဲ့ လူသားဆန်မှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကို သဘောမတူဘူးဆိုတာ ထုတ်ပြောရမယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က ဒီလူတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့ကိုင်တွယ်မှုလုပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ကိုဦးတည်မလဲဆိုတာပါ ပြောရမယ်”လို့ ဘီဘီစီနဲ့တွေ့ဆုံခန်းမှာေပြောခဲ့ပါတယ်။
“ဒျေါစုကိုလှတျပေး၊ အာဏာသိမျးမွနျမာစဈတပျမှ ပွညျသူတှအေပျေါပွုမူနတေဲ့ လုပျရပျတှကေို လကျမခံနိုငျဘူးလို့ စင်ျကာပူဝနျကွီးခြုပျပွော”
အာဏာသိမျးမွနျမာစဈတပျအနနေဲ့ ဖမျးဆီးထားတဲ့ လူထုခေါငျးဆောငျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ အစိုးရအဖှဲ့ဝငျတှအေားလုံးကို လှတျပေးဖို့နဲ့ လကျနကျမဲ့ပွညျသူတှကေို ကညျြအစဈတှနေဲ့ ပ ဈသတျနတောတှေ ခကျြခငျြးရပျဖို့ စင်ျကာပူဝနျကွီးခြုပျက ပွောလိုကျပါတယျ။
ဘီဘီစီနဲ့သီးသနျ့ပွုလုပျတဲ့ ဒီကနအေ့ငျတာဗြူးမှာ စင်ျကာပူဝနျကွီးခြုပျ လီရှနျလှနျးက အာဏာသိမျးတာဟာ ပွဿနာကို ဖွရှေငျးတာမဟုတျဘူးလို့ ပွောလိုကျပွီး “(စဈတပျအနနေဲ့) နောကျပွနျဆုတျရမယျ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို လှတျပွီး စစေ့ပျညှိနှိုငျးရမယျ။ မွနျမာပွညျအတှကျ ငွိမျးခမျြးတဲ့နညျးနဲ့ရှဆေ့ကျရမယျ”လို့ ဆိုပါတယျ။
စဈအာဏာရှငျဆနျ့ကငျြရေး ဒီမိုကရစေီရေးတောငျးဆိုနတေဲ့ လကျနကျမဲ့ပွညျသူတှကေို ကညျြအစဈတှနေဲ့ပစ.ျသတ.ျနတေဲ့ စဈတပျရဲ့လုပျရပျဟာ အလှနျအန်တရာယျမြားလှနျးတဲ့၊ လကျမခံနိုငျစရာလုပျရပျလို့ ပွောဆိုလိုကျပါတယျ။“လကျနကျမဲ့ အရပျသားဆန်ဒပွတဲ့သူတှကေို ကညျြအစဈသုံးပွီးပစ.ျသတ.ျတာ တျောတျောကို လကျမခံနိုငျစရာပဲ။ ဒါဟာ ပွညျတှငျးမှာတငျမက နိုငျငံတကာကိုပါ အန်တရာယျကွီးဖွဈစတေယျဆိုတာ လူတိုငျးသိနတောပဲ။
ခငျဗြားအငျတာနကျကို ပိတျခလြိုကျပမေယျ့ သတငျးတှကေရနတောပဲ။ မွနျမာပွညျသူတှကေလညျး သူတို့ဘကျမှာ ဘယျသူတှရှေိတယျဆိုတာ သိတာပဲလေ။ ဒီအစိုးရဟာ သူတို့ဘကျမှာမရှိဘူးလို့ ဆုံးဖွတျလိုကျရငျ အဲဒီအစိုးရက တကယျ့ကိုပွဿနာကွီးဖွဈသှားပွီလို့ ကနြျောထငျတယျ”လို့ ဝနျကွီးခြုပျ လီရှနျလှနျးက ဆိုပါတယျ။မွနျမာကိစ်စနဲ့ပတျသကျလာရငျ လကျတှကေ့တြဲ့သဘောထားရှိတဲ့အကွောငျးနဲ့ မွနျမာစဈတပျလုပျခဲ့တာကို သဘောမတူတဲ့အကွောငျး ထုတျပွောမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
“ကနြျောတို့မှာ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျရငျ လကျတှကေ့ဖြို့ဖွဈပါတယျ။ အခွားသောနိုငျငံတှအေမြားကွီးမှာ တနျဖိုးထားကွတဲ့ လူသားဆနျမှုကို ဆနျ့ကငျြတဲ့ ဖွဈခဲ့တဲ့ကိစ်စကို သဘောမတူဘူးဆိုတာ ထုတျပွောရမယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောက ဒီလူတှကေိုဆနျ့ကငျြတဲ့ကိုငျတှယျမှုလုပျမယျဆိုရငျ ဘယျကိုဦးတညျမလဲဆိုတာပါ ပွောရမယျ”လို့ ဘီဘီစီနဲ့တှဆေုံ့ခနျးမှွာေပွောခဲ့ပါတယျ
မြန်မာ့အရေးဆုံးဖြတ်ချက် ကန်အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီ အတည်ပြုလိုက်ပြီ